Aza Ny Gazety Anglisy “The Sun” No Anontaniana Raha Te-hahalala Izay Sainin’ny #Miozolmana1amin5 (#1in5Muslims) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2015 3:09 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, македонски, Français, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Mitaty ny vokatra mivaivain'ny tantara navoakany tamin'ny pejy voalohany ilay gazety britanika “The Sun”, miaraka amin'ny filazàna iray mahavelom-panontaniana hoe “1 amin'ny Britanika Miozolmana 5 no Miombom-po amin'ireo jihadis” ao anatin'ny vanimpotoana iray izay mampirongatra ny fankahalàna Silamo ao Angletera. Hatreto, naharaisana fitarainana 450 ilay famoahana, taraina nalefa any amin'ny Fikambanana Fenitra Fanaovana Gazety ho an'ny Tsy Miankina ao Angletera, ary tenifototra iray malaza, #1in5Muslims, nanoratana fanadrohadroana ny fankahalàna Silamo ao amin'ny The Sun.
Amin'ireo vahoaka 64 tapitrisa ao Angletera, eo amin'ny 5% eo no Miozolmàna. Tonga tamin'ny filazàny tsy manam-paharoa ny The Sun hoe tamin'ny alàlan'ny fakàna hevitra tamin'ny antso an-telefaona taminà Miozolmana 1.003 nataon'ny Survation, orinasa mpitsapa hevitra, izay tao anatin'izany ireo nanontaniana no nasaina nisafidy taminà lisitra misy fanambaràna (izay tsy nahitàna ny teny hoe “jihadi”, na dia navoakan'ny The Sun tamin'ny lohateny vaventiny aza ilay teny).
Saingy olona maro, isan'ireny ireo mpiasa amin'ny media sy mpitarika Miozolmana, no nanindry fa manjavozavo ihany ny nampiasàna ny fomba fiteny hoe “miombom-po”. Tsy mazava hoe “mpiady ao Syria” toa inona ilay tondroina — ireo miady ho an'ny ISIS, fantatra koa amin'ny hoe Daesh, ireo miady manohitra ny ISIS, sa ireo miady manohitra ny fitondràn'ny Filoha Bashar al-Assad.
Misy kiana hafa nosoratana ho an'ny fomba fiasan'ny Survation, izay ahitàna ny fiantsoana an-telefaona ny olona manana “fanampin'anarana Miozolmana”, ary ny tsy fisian'ny vondrona mpanaramaso mba hijery ny fomba famalin'ny olona hafa finoana amin'io fanontaniana iray io ihany. Tany ampiandohana ny The Sun dia nanatona orinasa hafa mpanao fitsapàna hevitra, izay nandà tsy hanao izany noho “izy io tsy azony antoka hahasolo tena marina ireo vahoaka Britanika Miozolmana ao anatin'ny fe-potoana sy noho ny tetibola napetrak'ilay gazety hanatanterahana azy”, hoy ny The Guardian.
Mirongatra ny fankahalàna Silao ao Angletera. Raha ny tarehimarika farany, nisy fisondrotana 300 isanjato ireo heloka natao noho ny fankahalàna Silamo tao anatin'ny herinandro taorian'ireo fanafihana tao Parisy. Tarehimarika nangonin'ny Tell Mama Helpline, fikambanana iray izay mandrefy ireo fanafihana miharo fankahalàna silamo, na am-bava izany na ara-batana, manerana ny firenena. Araka ilay tatitra, izay nomanina ho an'ny vondrona ao amin'ny governemanta miasa mandinika momba ny fankahalàna Miozolmàna:
Manambady ny mpiray tampo tsy omby kibo aminy ny #1in5Muslims . Miezaka mafy ny hanao toy izay ireo 4 ambiny
Mankany amin'ny Maoske ny #1in5Muslims rehefa Ramadàny. Mba hifanerasera sy hahazo hanina maimaimpoana
Frantsay ny #1in5Muslims …raha manisa zareo. Raha tsy izany dia Arabo
Angamba mampiasa azy ity any ampiasàna ny #1in5Muslims. Indrindra fa ao #Dubai
Mijangajanga, misotro toaka, mifoka bozaka, saingy tsy mandeha na aiza na aiza manakaiky ireo endy ovy nasiana hanitra ny #1in5Muslims satria voaràra tsy ho an'ny silamo izany ry rahalahy
#1in5Muslims no andrian'ny fon'ny zanakao vavy
#1in5Muslims no manafina biby fitaiza an-tokatrano , izay mety ho tahàka ity